पण्डितको बुहारीको चर्तीकला | Kamsastra
Sex, नेपाली यौन कथा, पण्डितको बुहारीको चर्तीकला,
पन्डितको बुहारी अत्ती नै SEXY थियो उमेरले ३५ नाघेपनी SEX मा कुनै कमी थिएन । कोही जवान केटाहरु बाटोघाटो हिन्दापनी निकै कामुक नजरले हेर्ने गर्थिन । अनी निकै मुख मिठ्याउदै जिभ्रो भित्र बहिर गर्थिन । त्यो पन्डित बाजेको घर र मेरो घर लगभग जोडीएकोनै थियो हाम्रो घरको पछाडिको भाग र पन्डित बाजेको घरको पछाडिको भाग मज्जाले आवत जावत गर्दा हुन्थ्यो कुनै पर्खाल या बार थिएन । मलाईपनी निक्कै कामुक पारामा कुराहरु सुनाउने अनी मौका मिल्नसाथ हात समाउने,अनी आफ्नु शरीर मेरो शरीर सङ्ग टास्न खोज्दथिन पन्डित बाजेको बुहारी । मलाई निकै काउकुती चल्दथ्यो अनी कहिले काही त आँफै सँग रिश उठ्ने पनि गर्दथ्यो किन मैले यस्तो मौका को सदुपयोग गर्न सक्दिन किन त्यो पन्डितको बुहारी लाई समाएर ढलाउन सकिन किन ? म आँफै सँग निकै प्रश्न हरु गर्दथे अब एकान्तमा भेटेभने अवस्यनै म त्यो पन्डितको बुहारी लाई समाएर गर्छु गर्छु यही अठोट गरे मैले ।
तर मैले त्यो सब गर्नु नै सकिन किन किन भित्र भित्र अर्कै किसिमको त्राश जाग्दथ्यो अनी त्यो सब गर्नबाट पछाडि हट्ने गर्दथे । तर प्रत्यक रात म त्यो पन्डितको बुहारी को कोठाको झ्याल को दुलोबाट भने भित्रको द्रिश्य चिहाउने गर्दथे बडो मज्जा लाग्दथ्यो यदी कुनै रात मैले झ्यालको दुलोबाट चिहाउन पाएन भने निन्द्रा नै लाग्दैन थियो । भित्रको द्रिश्य निकै उत्तेजना दिलाउने खालको हुन्थ्यो । पन्डितको बुहारी जहिले नाङ्गै सुत्ने गर्थिन जहिले सुत्नु भन्दा पहिला मज्जाले आफ्नु योनी खेलाउदै खुबै उत्तेजित हुन्थिन । निक्कै कालो थियो उनको योनी अनी योनिभन्दा माथि भुत्ला पनि निकै थियो यस्तो लाग्दथ्यो कुनै गाइ,बस्तु थिएन उनको त्यो घना जङ्गलमा । म निकै उत्तेजित हुन्थे त्यो पन्डित बाजेको बुहारी को कृयाकलाप हरु नियालेर अनी खप्नु नसकेर त्यो गर्थे जस्ले केहीछिन भएपनी मलाई आनन्दको माहाशागरमा पौडिन मद्घत गर्दथ्यो । मेरो दिनचर्या हरु यसरीनै बितिरहेको थियो । एकदिन सदा झै रातिको खाना खाएर म फेरी पन्डित बाजेको को घरको पछाडि उसैको बुहारी को कोठाको झ्याल तर्फ लम्किदै गए । जुन को उज्यालो चारैतिर फैलिएको थियो जुनको उज्यालोमा आफुलाई लुकाउदै म आफ्नु स्थानमा पुगे र झ्यालको प्वालमा आफ्नु आँखा राखिहाले । भित्र मधुरो रातो प्रकाश छरिएको थियो तर पन्डितको बुहारी भने त्यहा थीईनन रेडियो नेपालमा रत्ती को ९ बजेको कार्यक्रम प्रस्तुत भईरहेको थियो । कोठामा कोही थिएन तर रेडियो नेपाल भने आफ्नै शुरमा बज्दै थियो ।
मलाई के गरु के गरु भयो जाउ कि एक्छिन कुरु पन्डितको बुहारीलाई मेरो मन मानेन सो मैले कुर्ने नै निधो गरे । म थचक्क झ्याल मुनी नै आशन जमाएर बसे तर बेला बेलामा आँखा भित्र पनि लगाउदै थिए । धेरै कुरे लगभग डेढ घण्टा खै त पन्डितको बुहारी को आउने कुनै तरखर नै देखिन तर ... भित्र दराज खोलेको आवाज आयो म खुशी भए किनकी पन्डितको बुहारी कोठामा प्रबेश गरिसकेकी थीइन । मैले झटपट दुलोबाट भित्र चिहाउन थाले कपडा खोल्दै रहेछिन पन्डितको बुहारी सबै कपडा खोलिसकेर कोइला मा तेल तताउदै थीइन । आज कुनै नौलो द्रिश्य देखिने भयो भन्दै म रोमान्चित हुँदै थिए बेला बेलामा आफ्नु प्यान्ट छेड्ने तरखरमा रहेको मेरो सानो भाईलाई पनि सुमसुमाउदै थिए कतै बेला न कुबेला वाक्न पो थाल्छ कि भनेर । भित्र पन्डितको बुहारी आफ्नु शरीर आँफैले मालिश गर्दै तातो तातो तेलको स्पर्षमा निकै उत्तेजित हुँदै हल्का मुखबाट अर्कै किसिमको सानो तर तिखो स्वर निकाल्दै थीइन शायद धेरैनै प्याश लागेछ कि केहो आज खुब भुईमा कम्बल ओछ्याएर लडिबुडी गर्दै थीइन पुरा शरीर तेलले टल्किरहेको थियो पन्डितको बुहारी को बुबुपनी आज निकै तन्किएको थियो गएर मज्जाले माड्नु मन नलागेको पनि हैन तर के गर्नु डर यथावत नै थियो मनमा । नाइ नास्ती अवस्य पनि गर्दैन थीइन होला किनकी उसलाई लिङ्गको आवश्यक्ता थियो भने मलाई यौनी को । हेर्दा हेर्दै पन्डितको बुहारी ले योनिबाट पानीको भेल नै बगाउन थालि मलाई पनि निक्कै अप्ठ्यारो भईरहेको थियो म पनि छिटो भन्दा छिटो आफ्नु गन्तब्यमा पुग्न आतुर थिए आँखा चिम्म गरे टाउको आकाश तिर फर्काए अनी छिटो छिटो हात हल्लाउन थाले आकास्मत मेरो पुरा शरीर एकै ठाउमा खुम्चिन पुग्यो पिच्करी को जस्तो तेज गतिमा मेरो लिङ्ग देखी बाक्लो बाक्लो तरल पदार्थ त्यही पन्डितको बुहारीको झ्यालमा ठोकिएर टप्प टप्प भुईमा चुहिन थाल्यो ...मा लामो लामो श्वास फेर्दै आफ्नु कोठा तर्फ पाइला बढाउदै गए बढाउदै गए ... जुनको उज्यालोले मलाई किन किन लजालु मुस्कानले बिदाइ दिदै थियो .....!तको बुहारी अत्ती नै SEXY थियो उमेरले ३५ नाघेपनी SEX मा कुनै कमी थिएन । कोही जवान केटाहरु बाटोघाटो हिन्दापनी निकै कामुक नजरले हेर्ने गर्थिन । अनी निकै मुख मिठ्याउदै जिभ्रो भित्र बहिर गर्थिन । त्यो पन्डित बाजेको घर र मेरो घर लगभग जोडीएकोनै थियो हाम्रो घरको पछाडिको भाग र पन्डित बाजेको घरको पछाडिको भाग मज्जाले आवत जावत गर्दा हुन्थ्यो कुनै पर्खाल या बार थिएन । मलाईपनी निक्कै कामुक पारामा कुराहरु सुनाउने अनी मौका मिल्नसाथ हात समाउने,अनी आफ्नु शरीर मेरो शरीर सङ्ग टास्न खोज्दथिन पन्डित बाजेको बुहारी । मलाई निकै काउकुती चल्दथ्यो अनी कहिले काही त आँफै सँग रिश उठ्ने पनि गर्दथ्यो किन मैले यस्तो मौका को सदुपयोग गर्न सक्दिन किन त्यो पन्डितको बुहारी लाई समाएर ढलाउन सकिन किन ? म आँफै सँग निकै प्रश्न हरु गर्दथे अब एकान्तमा भेटेभने अवस्यनै म त्यो पन्डितको बुहारी लाई समाएर गर्छु गर्छु यही अठोट गरे मैले । तर मैले त्यो सब गर्नु नै सकिन किन किन भित्र भित्र अर्कै किसिमको त्राश जाग्दथ्यो अनी त्यो सब गर्नबाट पछाडि हट्ने गर्दथे । तर प्रत्यक रात म त्यो पन्डितको बुहारी को कोठाको झ्याल को दुलोबाट भने भित्रको द्रिश्य चिहाउने गर्दथे बडो मज्जा लाग्दथ्यो यदी कुनै रात मैले झ्यालको दुलोबाट चिहाउन पाएन भने निन्द्रा नै लाग्दैन थियो । भित्रको द्रिश्य निकै उत्तेजना दिलाउने खालको हुन्थ्यो । पन्डितको बुहारी जहिले नाङ्गै सुत्ने गर्थिन जहिले सुत्नु भन्दा पहिला मज्जाले आफ्नु योनी खेलाउदै खुबै उत्तेजित हुन्थिन । निक्कै कालो थियो उनको योनी अनी योनिभन्दा माथि भुत्ला पनि निकै थियो यस्तो लाग्दथ्यो कुनै गाइ,बस्तु थिएन उनको त्यो घना जङ्गलमा । म निकै उत्तेजित हुन्थे त्यो पन्डित बाजेको बुहारी को कृयाकलाप हरु नियालेर अनी खप्नु नसकेर त्यो गर्थे जस्ले केहीछिन भएपनी मलाई आनन्दको माहाशागरमा पौडिन मद्घत गर्दथ्यो । मेरो दिनचर्या हरु यसरीनै बितिरहेको थियो । एकदिन सदा झै रातिको खाना खाएर म फेरी पन्डित बाजेको को घरको पछाडि उसैको बुहारी को कोठाको झ्याल तर्फ लम्किदै गए । जुन को उज्यालो चारैतिर फैलिएको थियो जुनको उज्यालोमा आफुलाई लुकाउदै म आफ्नु स्थानमा पुगे र झ्यालको प्वालमा आफ्नु आँखा राखिहाले । भित्र मधुरो रातो प्रकाश छरिएको थियो तर पन्डितको बुहारी भने त्यहा थीईनन रेडियो नेपालमा रत्ती को ९ बजेको कार्यक्रम प्रस्तुत भईरहेको थियो । कोठामा कोही थिएन तर रेडियो नेपाल भने आफ्नै शुरमा बज्दै थियो । मलाई के गरु के गरु भयो जाउ कि एक्छिन कुरु पन्डितको बुहारीलाई मेरो मन मानेन सो मैले कुर्ने नै निधो गरे । म थचक्क झ्याल मुनी नै आशन जमाएर बसे तर बेला बेलामा आँखा भित्र पनि लगाउदै थिए । धेरै कुरे लगभग डेढ घण्टा खै त पन्डितको बुहारी को आउने कुनै तरखर नै देखिन तर ... भित्र दराज खोलेको आवाज आयो म खुशी भए किनकी पन्डितको बुहारी कोठामा प्रबेश गरिसकेकी थीइन । मैले झटपट दुलोबाट भित्र चिहाउन थाले कपडा खोल्दै रहेछिन पन्डितको बुहारी सबै कपडा खोलिसकेर कोइला मा तेल तताउदै थीइन । आज कुनै नौलो द्रिश्य देखिने भयो भन्दै म रोमान्चित हुँदै थिए बेला बेलामा आफ्नु प्यान्ट छेड्ने तरखरमा रहेको मेरो सानो भाईलाई पनि सुमसुमाउदै थिए कतै बेला न कुबेला वाक्न पो थाल्छ कि भनेर । भित्र पन्डितको बुहारी आफ्नु शरीर आँफैले मालिश गर्दै तातो तातो तेलको स्पर्षमा निकै उत्तेजित हुँदै हल्का मुखबाट अर्कै किसिमको सानो तर तिखो स्वर निकाल्दै थीइन शायद धेरैनै प्याश लागेछ कि केहो आज खुब भुईमा कम्बल ओछ्याएर लडिबुडी गर्दै थीइन पुरा शरीर तेलले टल्किरहेको थियो पन्डितको बुहारी को बुबुपनी आज निकै तन्किएको थियो गएर मज्जाले माड्नु मन नलागेको पनि हैन तर के गर्नु डर यथावत नै थियो मनमा । नाइ नास्ती अवस्य पनि गर्दैन थीइन होला किनकी उसलाई लिङ्गको आवश्यक्ता थियो भने मलाई यौनी को । हेर्दा हेर्दै पन्डितको बुहारी ले योनिबाट पानीको भेल नै बगाउन थालि मलाई पनि निक्कै अप्ठ्यारो भईरहेको थियो म पनि छिटो भन्दा छिटो आफ्नु गन्तब्यमा पुग्न आतुर थिए आँखा चिम्म गरे टाउको आकाश तिर फर्काए अनी छिटो छिटो हात हल्लाउन थाले आकास्मत मेरो पुरा शरीर एकै ठाउमा खुम्चिन पुग्यो पिच्करी को जस्तो तेज गतिमा मेरो लिङ्ग देखी बाक्लो बाक्लो तरल पदार्थ त्यही पन्डितको बुहारीको झ्यालमा ठोकिएर टप्प टप्प भुईमा चुहिन थाल्यो ...मा लामो लामो श्वास फेर्दै आफ्नु कोठा तर्फ पाइला बढाउदै गए बढाउदै गए ... जुनको उज्यालोले मलाई किन किन लजालु मुस्कानले बिदाइ दिदै थियो .....!!
Labels: Sex, नेपाली यौन कथा, पण्डितको बुहारीको चर्तीकला